Jirama: hiova ny fifanarahana amin’ny tsy miankina | NewsMada
Jirama: hiova ny fifanarahana amin’ny tsy miankina
Araka ny efa notaterina matetika teto, fanambin’ny filoham-pirenena Rajoelina ny hanafoana ny delestazy manerana ny Nosy, ny hampitomboana avo roa heny ny Malagasy mahazo herinaratra amin’ny vidiny mora.
Nampitomboana ny fatran’ny solika hamokarana herinaratra, nanomboka ny asabotsy 16 febroary teo. Nilaza ny minisitry ny Angovo sy rano ary ny akoranafo (MEEH), Andriamanga Vonjy, fa voakasik’ity fepetra ity ny hanafoanana ny delestazy any amin’ny tanàn-dehibe miisa 60 eto Madagasikara fa tsy ny eto Antananarivo ihany. Manampy izany, havaozina ny fifanarahana amin’ny orinasa tsy miankina, mamokatra sy mivarotra herinaratra sy solika amin’ny Jirama. Mikasika izay, anisan’ny haroso hodinihina miaraka ao anatin’ny fifanarahana ny fiantohan’ny tsy miankina ny famokarana, ny fikojakojana ny milina ary ny fiantohana ny solika avy hatrany fa tsy an’ny Jirama intsony.
Tohodrano sy ampivadiana
Vahaolana lavitra ezaka ahazoan’ny mpanjifa herinaratra sady mora, ny famokarana angovo azo havaozina. Ao anatin’izany ny herinaratra avy amin’ny tohodrano, ny avy amin’ny masoandro. Mikasika ity farany, anisan’ny natao andrana ary nahomby ny any Maevatanàna. Ampivadiana ny famokarana avy amin’ny gropy mandeha amin’ny solika sy ny avy amin’ny masoandro. Nihena ho 15 000 litatra ny solika lany raha 90 000 litatra ny tany aloha. “Azo afindra any amin’ireo toeran-kafa misy delestazy io fatran-tsolika io, hanampiana ny famokarana”, hoy ihany ny minisitra. Manampy izany, miisa 45 ny tanàn-dehibe ampiasana ity famokarana ampivadiana ny solika sy ny masoandro ity.
Mitentina 65 miliara Ar ny faktioran’ny Jirama tsy voaloan’ny minisiteran’ny Angovo ho an’ny taona 2018. Voalaza koa fa mbola misy manodidina ny 200 miliara Ar tsy voaloa ho an’ny taona hafa talohan’io. “Tsy maintsy aloa ireny”, hoy ny minisitra.